Tinye Apụta Image Post Tọmbneelụ gị WordPress RSS nri | Martech Zone
Anyị na-akwado ndị na-akwado anyị na ọdịnaya n'oge na-adịbeghị anya Taboola, a n'elu ikpo okwu nkwalite ebe a na-agụ ndepụta anyị ma isiokwu ndị ahụ kwekọrọ na mbipụta ndị ọzọ dị mkpa na weebụ. Anyị nwere obi ụtọ na njikwa nwere oke na nkesa na ụgwọ kwa ndu site na mmemme - tinyere ndị ọrụ ha adịla mma.
Anyị kwagara Taboola mgbe anyị jesịrị ọrụ ọzọ nke leghaara mmefu ego anyị anya wee chọzie ka anyị kwụọ $ 10,000 uru nke nkesa ha nyere anyị. Ikekwe akụkụ kacha njọ bụ na otu n'ime isiokwu ha chọrọ ka anyị kwụọ maka ịkwalite ya bụ isiokwu gbasara ha! Umm… nope.
Uru ọzọ nke Taboola bụ na anyị nwere ike iji ma ndepụta nke isiokwu dị iche iche anyị chọrọ ịkwalite yana jiri ndepụta anyị wee gaa n'ihu ịkwalite isiokwu anyị kachasị ọhụrụ. Dị jụụ n'ezie. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịkwalite akụkọ gbasara ndị na-akwado anyị, isiokwu anyị kachasị ewu ewu, yana ị nweta ụfọdụ ahịa na isiokwu ndị na-adịbeghị anya.
Na-akpali mmasị, ọbụlagodi ma ị kwado ihe osise na WordPress, nke ahụ anaghị agbanwe ndepụta RSS nke blọọgụ WordPress gị ịgụnye thumbnails ndị ahụ na ndepụta RSS gị. Echere m na nke ahụ bụ ọdịiche na arụmọrụ nke WordPress kwesịrị idozi, mana ugbu a enwere ihe ngwọta!
Ladislav Soukup ewepụtala ngwa mgbakwunye akpọrọ SB RSS nri Gụnyere na-enyere gị aka embed gị post thumbnail ọma tinye n'ọrụ ziri ezi RSS nri media: ọdịnaya na nkpado ogige. Wụnye ma hazie ngwa mgbakwunye ma ị nwere ike ịkọwapụta onyonyo ahụ yana ụfọdụ mgbakwunye ndị ọzọ.
Tags: ogigezụọ thumbnailLadislav Soukupọdịnaya mgbasa ozibiputere thumbnail na fiidirss nriRSS nri oyiyiRSS nri thumbnailrss thumbnailsb RSS na-eri nri gbakwunyere
Suresh Khanal kwuru
Ọ bụ isi ọwụwa n'ezie ịhụ mkpọsa RSS-na-email na-enweghị ihe onyonyo n'ihi na ndepụta RSS enweghị mkpado dị mkpa iji wepụ ihe oyiyi si. Agbanyeghị, gbanwere faịlụ function.php ma ugbu a MailChimp nwere ike ịdọrọ ihe ndị achọrọ ma ugbu a ozi ịntanetị mara mma.
Agbanyeghị, ihe onyonyo dị na faili RSS dị ezigbo mma ma chọọ iweghachi ha ka ha dabara adaba. Kwesịrị ịchọkwu ma chọta ihe ngwọta maka nke a.